मन्त्रीलाई समेत ‘गलाएको’ डेंगु : के–के हुन् लक्षण, कसरी बच्ने ?
काठमाडौं– सामान्य ज्वरो आएपछि बिहीवार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनाल उपचारका लागि पुल्चोकस्थित निदान अस्पताल पुगेका थिए ।
रगत परीक्षणका क्रममा डेंगुको संक्रमण देखियो, त्यसपछि उनलाई तत्काल ग्राण्डी अस्पताल धापासी लगियो । पछिल्लो समय देशभर महामारीको रूप लिएको डेंगुका भीआईपी बिरामी हुन्, मन्त्री खनाल ।
राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित तराईका/मधेशका अधिकांश जिल्लामा डेंगुको संक्रमण देखिएको छ ।
यस आर्थिक वर्षमा मात्र ४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २५ सयभन्दा बढी प्रभावित भएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका प्रवक्ता डा. अनुप बास्तोला बताउँछन् ।
यसरी प्रभावित भएकाहरूको देशका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा डेंगुको लक्षण देखिएका बिरामीहरू दिनहुँजसो पुग्ने गरेका छन् । यसरी पुग्नेमध्ये केहीमा डेंगुको संक्रमण पाइएको छ भने केही संक्रमण नदेखिएपछि फिर्ता भएका छन् ।
‘पछिल्लो समय डेंगु संक्रमण भयो भनेर २४ जना आएका थिए, चेकजाँच गर्दा केही पाइएन, मैले आज बिहान मात्र घर फिर्ता पठाइदिएँ,’ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रवक्ता डा. अनुप बास्तोलाले भने ।
२१ जनाको टेकु अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । १ सय ९ जनालाई डिस्चार्ज गरिएको उनले बताए ।
डेंगु जो कोहीलाई पनि लाग्न सक्ने भएकाले सचेत हुनुपर्ने डा. बास्तोलाको सुझाव छ ।
‘मन्त्री, तपाईं पत्रकार वा हामी डाक्टरहरू जो कोहीलाई पनि डेंगु लाग्न सक्छ, रोगले आफ्नो वा पराइ भन्दैन,’ प्रवक्ता बास्तोला भन्छन् ।
डेंगुबारे त्रास पनि बढी नै फैलिएको उनको भनाइ छ ।
‘रगत परीक्षण गरेर डेंगुको संक्रमण देखिँदैमा त्यसलाई डेंगु लागेको हुँदैन, अहिले त रगत परीक्षण गरेकै भरमा डेंगु लाग्यो अब अस्पताल भर्ना भइहाल्नुस् भन्नेजस्ता भ्रामक सूचना दिन्छन् र डर पैदा गरिदिन्छन्, त्यति धेरै डर मान्नुपर्ने अवस्था पनि भइहालेको छैन,’ डा. बास्तोला भन्छन्, ‘लामखुट्टेले सबैलाई टोक्छ, टोक्नेवाला लामखुट्टेमा डेंगुको संक्रमण छ कि छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
मानिसहरू आफ्नै लापरवाहीका कारण डेंगु लाग्ने गरेको र सरकारले पनि पर्याप्त जनचेतना फैलाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘जसले आफ्नो घर सफा गर्दैन, जथाभावी बोत्तल र घाम नपुग्ने स्थानमा पानी फाल्दै हिँड्छ, त्यसैलाई पहिले डेंगु लाग्छ,’ प्रवक्ता डा. बास्तोलाले भने, ‘दुःखको कुरा त के छ भने डेंगु कसरी लाग्छ भन्ने चेतनासम्म सकारले जनतामा पुर्‍याउन सकेको छैन ।’
डेंगु सार्ने लामखुट्टे घाम नपुग्ने स्थानमा लामो समयसम्म रहने सफा पानीमा बस्ने जानकारी दिँदै उनले लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्न सरकारको मुख ताकेर बस्न नहुने बताए ।